Maxkamad Somaliland ku taal oo xukun adag ku riday Malxiisadii ninka noqotay - Caasimada Online
Home Warar Maxkamad Somaliland ku taal oo xukun adag ku riday Malxiisadii ninka noqotay
Maxkamad Somaliland ku taal oo xukun adag ku riday Malxiisadii ninka noqotay
Hargeysa (Caasimada Online)- Waxaa maalmihii ugu dambeeyey Somaliland ka taagneyd arrintii ugu yaabk badneyd ee ka dhacdo gudaha Soomaaliya inta la xasuusto markii uu nin malxiis iska soo dhigay uu dhawr maalin aroos ka bixiyey gabar iyo will is aroosay.
Arrintaan ka dhacday Somailand ayaa timaaday markii uu ninkii arooska ahaa uu ogaaday maalmo kadib nin qofka malxiiska u noqoday kadibna arooska ka bixinayey inuu yahay nin rag ah oo naag iska soo dhigay wuxuuna dacwad u gudbiyey maxkamadda.
Haddaba maxkamadda ayaa soo xirtay aroosadii iyo ninkii malxiiska ahaa ee iska dhigay naagta waxaan maanta si rasmi ah go’aan looga gaaray arrintoosa.
Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ee Maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in Maxkamada Gobolka Maroodi jeex Maanta ay xukuno kala duwan ku ridey Malxiisadii ninka noqotay iyo Aroosaddii uu la socday iyo gabar kale.
Maxkamaddu ayaa ku xukuntay Aroosaddii ninku uu u noqday malxiisadda Laba Sanno oo xarig ah,halka ninkii Malxiiska ahaa ee gabadha iska dhigayna lagu xukumay Hal Sanno iyo Lix bilood oo xarig ah.
Waxaa sidoo kalena wararka ay sheegayaan in maxkamaddu ay xukun ku riday gabar lagu soo eedeeyey inay gacan siisay dadkaas.